अबकाशपछि मेरो नयाँ जीवन शुरु हुन्छ-चिन्तामणि सिवाकोटी – BikashNews
चिन्तामणि सिवाकोटी- डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक
निकै संघर्षपूर्ण जीवन यापन गर्दै चिन्तामणि सिवाकोटी नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ । करिव ३३ वर्ष राष्ट्र बैंकमा सेवा गरेर फागुन १८ गते अवकाश लिँदै हुनुहुन्छ । जागिर बाहेक गीत, कविता, लेख रचना लेखनमा सक्रिय रहँदै आउनु भएको सिवाकोटीको अवकाश पछिको योजना के छ ? प्रस्तुत छ विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेलले गरेको अन्तरवार्ताको सार ।
केही महिनाअघि राष्ट्र बैंकको गभर्नरको बलियो दावेदारको रुपमा सञ्चार माध्यममा तपाईंको नाम आयो । पछिल्लो समय बीमा समितिको अध्यक्षको दावेदारको रुपमा पनि तपाईंको नाम आयो । दुबै पटक तपाईंको नाम आयो तर जिम्मेवारी आएन । किन यस्तो भएको हो ?
मेरो लागि यो उपयुक्त प्रश्न नै होइन । सम्भावनाको सूचीमा मेरो पनि नाम थियो । गर्भनरको लागि मेरो दावी र सञ्चारकर्मीको विश्लेषण सबै ठिक थियो । रोलक्रममा गभर्नरपछिको डेपुटी गभर्नर भएर पनि ४ वर्ष काम गरिसकेको, गभर्नर विदेश जाँदा, गभर्नर बिदामा बस्दा २८/२९ पटक कामु गभर्नरको भूमिका निर्वाह गरिसकेको र सानोदेखि ठूलो जिम्मेवारीसम्म ३३ वर्षसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गरेको हिसावकिताब सबैले मलाई गभर्नर बन्न योग्य व्यक्ति भन्नु स्वाभाविक थियो । २ नम्बरमा मन्त्रिपरिषद्मा मेरो नाम सिफारिस भएको पनि हो । १ नम्बरमा सिफारिसमा पर्नु भएका महाप्रसाद अधिकारी गभर्नरमा नियुक्त हुनुभयो । पद एउटा, आकांक्षी धेरै । सबैलाई भाग पुग्ने कुरा पनि भएन ।
वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायमा बसेर अब्बल काम गरिरहेको व्यक्तिलाई बीमा क्षेत्रको नियामक बीमा समितिको अध्यक्ष लैजाँदा त्यो क्षेत्रमा राम्रो काम हुन सक्छ भन्ने हिसावकिताबले सञ्चार माध्यमले बीमा समितिको सम्भावित व्यक्तिको सूचीमा मेरो नाम पनि आयो । त्यसलाई पनि मैले स्वभाविक रुपमा लिँए । म राष्ट्र बैंकमा जिम्मेवारीमा रहिरहेको अवस्थामा अरु खाली व्यक्तिलाई बीमा समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी सरकारले दिएको छ । त्यसलाई पनि मैले सहज रुपमा लिएको छु ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग तपाईको राम्रो सम्बन्ध छ । दुबै ठाउँमा जान तपाईंले मिहेनत गर्नुभयो । तर जिम्मेवारी पाउनु भएन । यतिबेला तपाईंमा कत्तिको निराशा छ ?
मलाई न निराशा छ, न कुण्ठा छ, न म हतोत्साहि भएको छु । मैले ३३ वर्ष जागिर खाएँ । मसँगै राष्ट्र बैंकमा जागिर खाने साथीहरु ३० वर्षपछि जागिर छोडेर बस्नु भयो । मैले ३३ वर्ष काम गर्ने मौका पाए । सरकारले मलाई डेपुटी गभर्नरको जिम्मेवारी दियो । मैले पुरा गरेँ । डेपुटी गर्भनर बन्ने मौका नपाएको भए म २०७४ चैतमा नै रिटार्यड हुने थिएँ ।
डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश हुँदा पाउने पेन्सन भन्दा बीमा समितिको अध्यक्षले पाउने तलब सुविधा कम भएकोले तपाईंले बीमा समितिमा जान अनिच्छा व्यक्त गर्नु भएको हो ?
त्यस्तो होइन । इच्छा जाहेर नगरेको भन्ने पनि होइन । फागुन १८ गते म राष्ट्र बैंकबाट अवकाश हुन्छु । सरकारले जिम्मेवारी दिएको भए फेरी ४ वर्ष काम गर्ने थिए । यहाँ सेकेण्ड म्यान भएर काम गरेँ, त्यहाँ फष्ट म्यान भएर काम गर्ने मौका मिलेको भए केही नयाँ काम पनि गर्न सकिने थियो । केही नयाँ सोच पनि थिए । तर बीमा समितिको अध्यक्ष बन्नको लागि मैले टाउको फुटाएर मरिहत्ते गरेको पनि होइन ।
डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश हुँदैमा बढी पेन्सन आउने होइन । मैले राष्ट्र बैंकको स्थायी जागिरबाट २०७२ सालमा नै अवकाश लिइसकेको छु, डेपुटी गभर्नर नियुक्ती भए कै दिन । मेरो पेन्सन मासिक ६५ हजार रुपैयाँ आउँछ । बीमा समितिको अध्यक्षको तलब भत्ता के कति छ मलाई जानकारी पनि छैन । यो विषयमा थप कुरा गर्नुको औचित्य पनि छैन । पदमा नै जानुपर्छ, तलब नै खानु पर्छ भन्ने छैन, बाहिर बसेर पनि सहयोग गर्न सकिन्छ ।
डेपुटी गभर्नर भईसकेको मान्छे, राम्रो पहुँच र प्रभाव भएको व्यक्तिलाई निजी क्षेत्रका ठूला कर्पोरेट हाउसले पनि भित्र्याउने चाहेका होलान् । अफर आएका पनि होलान् । अब के गर्नुहुन्छ ?
अहिले नै ५/६ ठाउँबाट कुरा ल्याइसके तर कुनै पनि प्रस्तावमा मैले कुरा पनि गर्न चाहिन । मलाई जागिर खाने लोभ पनि छैन । किनभने ३३ वर्ष जागिरमा खटेर काम गरियो । त्यसमा पनि डेपुटी गभर्नर भएपछि धेरै नै खट्नुपर्याे । जहान परिवार, छोराछोरी, आफन्त कसैलाई पनि समय दिन सकिएको छैन । डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश पाएपछि कम्तिमा ३/४ महिना परिवार र आफन्तसँग बिताउँछु । आफ्ना व्यवहार पनि हेर्छु । कतिपय व्यवहार लठिपत्र भएका छन् । ती व्यवहार मिलाउँछु ।
अर्को कुरा, म डेपुटी गभर्नर भन्दा ४ तह तल झरेर, एकदमै दुःखी, लालची जस्तो भएर अन्त जागिर खान जान्न । मैले राष्ट्र बैंकको, डेपुटी गभर्नर पदको गरिमा जोगाउनुपर्छ । जहाँ पायो त्यहाँ, जस्तो पायो त्यस्तै जागिर खान्न । बरु सल्लाहकारको भूमिकामा बसिएला । राज्यलाई पनि अनुभवि मान्छेकाे खाँचाे पर्ला । त्यसमा सहयाेग गर्न सकिन्छ । त्यसबाहेक लेख्ने पढ्ने काम गर्छु । कलाकौसल मर्न दिन्न । मान्छे अवकाशपछि दिन काट्न गाह्रो हुन्छ भन्छन् । मलाई त्यस्तो हुँदैन । अस्ति मात्रै गीतकार संघको सदस्य लिएँ । गीतकार साथीहरुसँग भेटघाट, छलफल बाक्लि सकेको छ । संघको अधिवेशन आउँदैछ, पत्रिका निकाल्नु पर्यो, लेखिदिनु पर्यो भनेर आईसक्नुभयो । अब त्यसको सम्पादनको जिम्मेवारी आउला । मेरो गीतको किताब प्रकाशन गर्ने काम बाँकी छ । मेरो संस्मरण लेखनको काम पनि बाँकी छ । यी सारा काम छोडेर गति छोडेर पैसा कमाउन हिड्दिन ।
तपाईंको जीवनमा अबको प्राथमिकता पैसा हो कि, प्रतिष्ठा हो कि ? सम्बन्ध हो कि ? अरु केही ?
प्रतिष्ठा । मैले जीवनमा सधै प्रतिष्ठालाई प्राथमिकतामा राखेको छु । प्रतिष्ठा आर्जन गर्नको लागि सम्बन्धलाई सँगै लैजानुपर्छ । त्यसैले मैले भनेको छु अब म पहिला पुराना साथीहरुसँग, गाउँठाउँका मित्रहरुसँग भेटघाटमा निस्कँदैछु । अहिले मलाई पैसाको ठूलो जरुरी नै छैन । किनभने छोरीहरु राम्रा राम्रा विश्वविद्यालयमा स्कोलरशिपमा पढिरहेका छन् । उनीहरुले राम्रो जब पाउँछन् भन्नेमा मलाई कुनै शंका छैन । छोरो पनि अमेरिकामा जन्मिएको हो । कागजपत्रहरु उतैका छन् । राम्रै स्कूलमा पढिरहेको छ । अहिलेको पुस्ताका केटाकेटी, उतै जान खोज्छन् । राम्रै जब पाइहाल्ला । उसको पनि चिन्ता छैन । म्याडम (श्रीमती)को जब छ, मासिक सवा लाख कमाउँछिन् । अझै ९/१० वर्ष उनको जब छ । त्यसमा पनि समस्या भएन । मेरो मासिक ६५ हजार पेन्सन आउँछ । केही रकम घर भाडा वाफत आउँछ। मलाई दालभात खान, औषधि उपचार गर्न यसैले पुग्छ । अलिअलि लगानी पनि छ । त्यसबाट पनि आईहाल्छ । अब मैले जागिरको लागि मरिहत्ते हाल्नु पर्ने के छ र ? सबैको बाटो त्यहि हो । आर्यघाट जानैपर्छ । अन्तिममा चाहिने दाउरा त्यत्ति नै हो । जति अरब कमाउनेलाई पनि चाहिने दाउरा त्यत्ति नै हो । त्यसैले म त अबको दिनमा गर्न सक्दा समाजसेवा गर्छु । नागरिक समाजमा आवद्ध हुइन्छ कि, अरु क्षेत्र हुन्छ कि । अहिलेसम्म केही सोचेको छैन, सोच्ने फुर्सद पनि छैन । ११ गतेसम्म गभर्नरज्यू बिदामा हुनुहुन्छ । मैलै कामय मुकायम गभर्नरको भूमिका लिएको छु । १२ गतेदेखि नयाँ कर्मचारीको लागि अन्तरवार्ता गर्दैछौं । शुक्रबार, शनिवार पुरै काममा खट्नुपर्छ । १८ गते अवकाश लिएपछि मात्र नयाँ सोच बनाउने हो, नयाँ योजना बनाउने हो । त्यसपछि नयाँ जीवन शुरु हुनेछ ।
अवकाशपछि भौतिक बस्तुको भोगविलासबारे के-कस्तो आकांक्षा छन् ?
आफ्नो हैसियत र क्षमताअनुसारका भौतिक सुविधा भोगचलन गर्नुपर्छ । समय अनुसार आधारभूत पूरा गर्न मेराे कमाईले पुग्छ । किनभने म करिब ४० लाख मूल्य पर्ने गाडी किन्न पनि सक्छु । म आफै गाडी चलाउँछु । ड्राइभर राख्न नसकुँला । ५५ वर्षको भए । अझै १५/२० वर्ष म आफै गाडी चलाउन सक्छु । एउटा मोवाइल लिनै पर्यो । एउटा घडी लगाउनै पर्यो । च्यातिएको, झुत्रो मैलो लुगा लगाएर म हिड्दिन । डेपुटी गभर्नरको गरिमा राख्नको लाग पनि राम्रो लुगा लगाउँछु । यति गर्न मलाई पेन्सनले पुग्छ पनि । तर म होडबाजीमा जान्न । करोड मूल्यको गाडी चड्दिन । रातारात कसरी पैसा कमाउने भनेर हिड्दिन । कतै लगानी गरेर केही कमाई हुन्छ भने जेन्युन काम गरिन्छ । बुढेसकालको लागि पनि पैसा चाहिन्छ । समाजसेवा गर्नको लागि पनि पैसा चाहिन्छ ।
आफ्ना केही व्यवहार मिलाउनु छ भन्नुभयो, त्यो भनेको के हो ?
एउटी छोरीले स्नातकोत्तर तहसम्मको पढाई सिध्याइन् । अर्की छोरीले स्नातक तहको पढाई सिध्याउन लागिन् । छोरो एलेबल पढ्दैछ । उनीहरुको उच्च शिक्षा र घरबारको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । त्यस्तै घर व्यवहारका काम पनि छन् । केही जग्गा जमिनको व्यवस्थापनको काम छ । केही लगानी व्यवस्थापनको काम छ । राष्ट्र बैंकमा बसेर यी केही काम हेर्न भ्याइन्न, पाइन्न ।
जमिन व्यवस्थापन र लगानी व्यवस्थापनमा पनि धेरै समय दिनुपर्ने छ र ?
सानो सानो काम पनि गर्न भ्याएको छैन । जस्तै, विराटनगरमा मैले १० कठ्ठा जग्गा किनेको थिए । पछि २ कठ्ठा जग्गा जोसँग किनेँ, उसैलाई बेचेँ । तर त्यो नामसारी गर्न जान पनि भ्याएको छैन । काठमाडौंमा एउटा जग्गा छ, त्यहाँ भूइचालोले अलिकति पर्खाल भत्कियो । त्यो बनाउन पनि भ्याइएन । अहिले पुरै पर्खाल लडेको छ । त्यता पनि केही समय दिनुपर्छ । २०४९ सालदेखि आईपीओ भर्दै आएको छु । केही आफ्ना नाममा छन् । केही छोराछोरीको नाममा छन् । त्यसकाे व्यवस्थापन गर्नुछ ।
२०४९ सालदेखि अहिलेसम्म सेयरमा कति लगानी गर्नु भयो ? अहिले त्यसको बजार मूल्य कति पुग्यो ?
हिसाव किताब नै छैन । सबै खोज्छु अब । कति वटामा आईपीओ भरियो, कतिमा भर्न छुट्यो । राष्ट्र बैंकले कर्मचारीलाई सेयर बजारमा लगानी गर्न बन्देज लगाएपछि दोस्रो बजारमा ध्यान दिएको पनि छैन । तर आईपीओमा भने जानकारीमा आएसम्म भरिएको छ ।
३३ वर्ष काम गरेर राष्ट्र बैंक छोड्दै गर्दा यो संस्थाबारे तपाईको विश्लेषण के छ ? तपाईंले चाहे जस्तो बलियो र प्रभावकारी नै छ वा कमजोर र न्यून प्रभावकारी ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रोगेश अवस्थाबारे म सन्तुष्ट छु । हामीले जे गर्न सक्थ्यौं, त्यो गरेका छौं । यो संस्था व्यक्तिले होइन, सिष्टममा चलेको छ । संस्थागत रुपमा काम गर्दा कतिपय कुरा मैले चाहेर पनि गर्न सकिएन होला । अरुलाई पनि त्यस्तो महशुस भएको होला । समग्रमा हेर्दा राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म गरेको प्रगति अतुलनीय छ । सबैभन्दा प्रोफेशनल मान्छे राष्ट्र बैंकमा छन् । राष्ट्र बैंकमा भ्रष्टाचार हुँदैन । वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्न, यस क्षेत्रलाई विश्वसनिय बनाउन, यस क्षेत्रको जोखिम न्यूनिकरण गर्न, वित्तीय क्षेत्रको साक्षरता वृद्धि गर्न, वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्न, वित्तीय क्षेत्रमा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्न लगायत राष्ट्र बैंकले जे जस्तो भूमिका खेलेको छ, त्यो प्रशंसनीय नै छ ।
डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश हुँदा हातमा कति पैसा पर्छ ?
डेपुटी गभर्नर भएपछि २८ वर्ष काम गरेर अवकाश लिँदा पाउने सुविधा त्यतिबेला नै लिई सकियो । अहिले आउने भनेको ५ वर्षको अवधिमा डेपुटी गभर्नरले पाउने सुविधा मात्र हो । त्यसमा कल्याणकारी कोष हुन्छ । औषधि उपचार सुविधा हुन्छ । ५ वर्षमा मैले बिरामी बिदा लिएको छैन, घर बिदा लिएको छैन । ती सबै सञ्चित भएर बसेको हुन्छ । त्यसकाे हिसाव त सम्बन्धित विभागले राखेकाे हुन्छ ।
(फागुन १० गते २ः३० अन्तरवार्ताकाे केही अंश सम्पादन गरिएकाे छ । सम्पादक)
One comment on "अबकाशपछि मेरो नयाँ जीवन शुरु हुन्छ-चिन्तामणि सिवाकोटी"
दिल कुमारी राइ says:
राष्ट बैकको सेयर किन्न पाईन्छ कि पाईन्न अनि ipo खोल्न खालि छ भनेफजानकारि दिनुस न